Nezvedu - Shijiazhuang Shencai Pigment Fekitori
Shijiazhuang Shencai pigment Factory yakavambwa muna 2003 Tine hombe Iron oxide pigment Production Base (Hebei Chengyu Pigment Co., Ltd), iri muNingjin Salt Chemical Industrial Park, Hebei Province, idunhu remakemikari epaki maindasitiri, iri pamutemo mu kugadzirwa. Iine matatu ekugadzira mitsara, pagore ekugona inokwana matani zviuru makumi mashanu
Kugadzirwa kwesimbi oxide tsvuku, iron oxide yero, iron oxide nhema, simbi oxide yakasvibirira uye imwe simbi oxide yakateerana pigments, inonyanyoshandiswa mukupenda zvipfeko, zvekuvakisa, epurasitiki rabha uye yemvura-yakavakirwa Ruvara peta, kuvaka pamusoro kushongedza kupfeka zvinhu. Own R & D technical Team uye Professional Laboratory, uchishandisa michina yekuyedza yepamberi, kuona kugadzirwa kwega rega batch yezvigadzirwa neyakagadzikana mhando. Sachigaro Gu zhihe anotambira vanhu kubva kumarudzi ese ehupenyu kuti vashanyire fekitori kuti vakurukure nekutsvaga budiriro yakafanana. Tichava iwo mutengo wakanakisa uye neyakanakisa sevhisi sevhisi kudzokera kune zvekare uye zvitsva vatengi.
Shijiazhuang Shencai pigment yakavambwa muna 1985
Kambani yakanyoreswa zviri pamutemo muna 2003
Yekutanga simbi oxide yero yekugadzira base yakagadzwa muna 2004, iri muGuzhuang Industrial Park, Shangzhuang Town, Luquan District, Shijiazhuang, ine goho regore regumi rematani zana.
Muna 2016, pakupindura National kwezvakatipoteredza gwara gwaro, idzva simbi oxide pigment kugadzirwa chawo hwakagadzwa muna Ningjin munyu kemikari maindasitiri paki .Mugore rimwe chete, bazi rakanyoreswa Hebei Chengyu Pigment Co., Ltd.
Muna 2017, pagore goho matani 50000 esimbi oxide kugadzirwa chawo rakanga pamutemo kuiswa kushanda, kusanganisira matatu simbi oxide pigment kugadzirwa mitsetse. Iron oxide yero yekugadzira mutsara, iron oxide tsvuku yekugadzira mutsara, iron oxide nhema yekugadzira mutsara.
Muna 2020, isu tinoshingairira kusimudzira zvekuchengetedza nharaunda michina uye nekushandura zvigadzirwa zvekugadzira.